Lalàna & Zo: Vavolombelon’i Jehovah any Azerbaïdjan | JW.ORG
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Tsonga Yorobà Zoloa
Topy Maso An’i Azerbaïdjan
Nosoratana ara-dalàna tany Bakou ny Vavolombelon’i Jehovah, * tamin’ny 1999. Naverina nosoratana ara-panjakana indray izany tamin’ny 2002. Azo lazaina hoe nahazo fahalalahana ara-pivavahana ihany ny Vavolombelona nandritra ny taona maro taorian’izay. Nanara-maso akaiky azy ireo foana anefa ny fitondram-panjakana. Nisy polisy nanao bemidina, ohatra, rehefa niara-nivory izy ireo, ary norarana ny boky sasany ampiasain’izy ireo. Nanova ny lalàna momba ny fivavahana ny fanjakana. * Tsy neken’izy ireo avy eo ny fangatahan’ny Vavolombelon’i Jehovah hamerina hanoratra ny fikambanan’izy ireo ho ara-dalàna, tamin’ny 2010, satria nisy olana, hono, ny taratasin’izy ireo. Tsy tena ara-dalàna àry ilay fikambanana ara-pivavahana any Bakou.
Mitombo ny fampijaliana ny Vavolombelon’i Jehovah sy ny fandrarana ataon’ny fanjakana amin’izy ireo satria vao mainka manara-maso ny asa ara-pivavahana ny fanjakana. Nataon’ny polisy savahao ny tranon’ny Vavolombelon’i Jehovah sasany ary nalain’izy ireo ny zavatr’olona, anisan’izany ny Baiboly. Nosamborin’ny manam-pahefana sy nampangainy ny Vavolombelona sasany satria hoe niresaka ny zavatra inoany tamin’ny olon-kafa. Nampandoavina sazy ambony be sy nogadraina àry izy ireo. Tsy nahazo alalana hanoratra ara-dalàna ny fikambanany ny Vavolombelona tany amin’ny tanàna sasany ka nolazain’ny manam-pahefana fa tsy ara-dalàna ny asa ara-pivavahana ataon’izy ireo. Helingelenin’ny manam-pahefana àry izy ireo ary gadrainy ny mpivavaka ao aminy sady ampandoaviny sazy ambony be.
Ampijalina sy gadraina ireo tovolahy Vavolombelon’i Jehovah satria tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretana. Tsy misy fanompoana sivily azo asolo ny fanaovana raharaha miaramila mantsy any. Nanao fifanekena tamin’ny Filan-kevitra Eoropeanina i Azerbaïdjan nefa mbola tsy hajainy foana ny fahalalahana ara-pivavahana, ohatra hoe rarany ny boky ara-pivavahana. Ho setrin’izany dia nametraka fitoriana 19 tany amin’ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon’olombelona ny Vavolombelon’i Jehovah any Azerbaïdjan, nanomboka tamin’ny 2007 ka hatramin’ny 2014.
^ feh. 2 Fikambanana Ara-pivavahan’ny Vavolombelon’i Jehovah any amin’ny Repoblika Azerbaijaney
^ feh. 2 Komitim-panjakana Misahana ny Fikambanana Ara-pivavahana